Posted by Tranquillus | Feb 1, 2021 | Shabakada
Hab maamuuska qaranka: kala fogaynta bulshada cusub
Wareegto, la daabacay Janaayo 28, 2021 gudaha Rasmi Ah Journal, ayaa dib u eegay masaafada bulshada ee ay tahay in la ixtiraamo marka dadku aysan xiranayn maaskaro.
Masaafadaas jireed hadda waxaa lagu hagaajiyay 2 mitir meel walba iyo xaalad kasta. Sidaas awgeed ayaa hab maamuuska qaranka wax looga beddelay.
Marka, shirkadda dhexdeeda, shaqaaluhu waa inay ixtiraamaan, markay xiran yihiin maaskaro, masaafo ugu yaraan 2 mitir u jirta dadka kale (shaqaalaha kale, macaamiisha, isticmaaleyaasha, iwm.). Haddii aan la ixtiraami karin masaafadan bulsheed ee 2 mitir ah, xirashada maaskaro waa qasab. Laakiin taxaddar, xitaa maaskaro, masaafada jireed waa in la ixtiraamo. Waa ugu yaraan hal mitir.
Waxaa lagaa doonayaa inaad ku wargeliso shaqaalaha xeerarkan cusub ee fogeynta.
Qolalka qafiska, waxaad xaqiijineysaa in fogeynta jireed sidoo kale la ixtiraamo, ugu yaraan hal mitir oo lala xiriirinayo xirashada maaskaro. Haddii ay qasab tahay inay iska saaraan maaskarada, borotokoolka ayaa tusaale u ah qubeyska, shaqaaluhu waa inay markaa ixtiraamaan masaafo dhan 2 mitir oo u dhaxeysa iyaga.
Borotokoolka Qaranka: "dadweynaha guud oo leh sifeyn ka badan 90%" maaskaro
Xirashada maaskaro marwalba waa qasab
Hab maamuuska qaranka: kala fogeynta cusub, maaskaro qeybta 1aad iyo hawo qaadasho saacad kasta July 10th, 2021Tranquillus
READ Soo hel MindView
horeMiyuu heshiis wada jir ah oo bixiya dheefaha mushaharka dib loogu noqdaa falcelinta shaqaalaha la eryey ka hor intaan la saxiixin?
socdaWaxaan rabaa inaan tababaro, laakiin xagee laga bilaabayaa?